Andrianainarivelo Hajo : “Mandroso ny firenentsika raha kristianina ny mpitondra” | NewsMada
Andrianainarivelo Hajo : “Mandroso ny firenentsika raha kristianina ny mpitondra”
“Raha zohina: tsy tokony hatao am-bava fotsiny ny fiainana kristianina, fa ampiharina amin’ny andavanandro. Na ho an’ny tsirairay avy izany, na ho an’ny daholobe. Raha milaza fa kristianina ny firenena malagasy, raha milaza fa kristianina ny mpitondra rehetra sy ny tomponandraikitra politika: tsy misy antony tsy hampandroso ny firenentsika.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny Antoko MMM, Andrianainarivelo Hajo, ny faran’ny herinandro teo. Taorian’ny famelabelaran-kevitra narahina adihevitra nataon’ny pretra s. j. Rakotoarison Ularion: “Ny olom-pirenena kristianina sy ny politika araka ny fampianarana sosialin’ny fiangonana”, teny amin’ny Ivontoerana sosialy Arrupe, Faravohitra, io.
Ny zava-misy: tsy sitrapon’Andriamanitra ny zava-miseho eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao. Tsy tokony hanome tsiny an’Andriamanitra isika raha, ohatra, ka misy zavatra tsy mandeha eto amin’ny firenena, araka ny nambarany. Isika zanak’Andriamanitra izany no mety ho anton’izao zava-misy rehetra izao.
Manana adidy amin’ny fampandehanana ny raharaham-pirenena ny olona rehetra. Tsy midika velively ny fanaovana politika fa mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Vao mainka aza sehatra iray hahafahantsika manatanteraka izay hetahetan’Andriamanitra izay amin’ny fanasoavana ny mpiara-belona ny politika.